Oromo News 05.07.21 | KWIT
Oromo News 05/07/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasaniiti namni lama dabalataan seati 24 keessati sababa Covid-19 kan due yoo tau, namni 700 ol ammo haarawa kan qabamaniidha, nama 15 Woodbury County keessa dabalate. Waliigalatti parsanti dhaan namni qabame jiru 3.8% dha, akka biyyati xiqqaata deemu jira.
Ogeessa fayyaa Winnebago akka jedheti, Nebraska lakkoofsa guddaa nama talaali corona virus fudhate guyyama guyyaan akka gabaasa deemu jitru hime. Ammati, namni parsanti 70% yoo xiqqaate talaali corona virus kan jalqaba fudhatee jira. Lakoofsi kunis nama keessa clinic fudhatee dabalateeti.
South Dakota keessati namni sababa corona virus hospitaala galee yaalamu jiru gad xiqaate akka jiru himan. Deparmantiin fayyaa akka jedhetti namni 90 yeroo ammaati yaalamuu akka jiran himan kunis guyyaa jalqaba irraa namni baayen akka hir’ate mullisa.
Murteen walfakkaatu wagga darbe warra seera wajjiin oole. Seera haarawa bahe hojii irra oolchuf hojattooni addaan fageenya faana 6n akka qilleensi waliiti hin ukkaamamnef kan fayyadu yoo tau, garuu haguugin fuula kan godhatamuudha, yoo hojattooni kan qabaman ta’an company keessati akka qorannoo godhan himame jira.
Itti gaatamtooni jia dhuftuu lamaan keessati bishaan gara laga Missouri gad dhiifamu dabaluu akka qaban himan, laga kana irrati magaaladhan abdiii qaban fi traffikaaf dhaaf bishaan gahaa akka jiru mullisuudhaafi. Haali isaa baaye gogaa tauun isaa fi hammi baradoo haala hin beekamneen xiqqaa tauu irraa wagga kana bishaan xiqqaan gara lagaa kan seenu akka tae Army Corps Engineer himani jiru. Sababa kanaa itti gaafatamtooni bishaan wagga kana parsanti 69% qofa gara lagaa seena jedhanii jiru.